၂၀၂၀အလှနျ မာတိကာ – Federal Journal
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဝိရောဓိတွေ ရှိနေလင့်ကစား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေ ၂၀၁၅က ထက် ပိုမိုသော ရာခိုင်နှုန်းအနိုင်နဲ့အတူ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးပဲဖြစ်တယ်။ ဒီရလာဒ်ကို ‘အနိုင်’ဆိုတဲ့ စကားလုံးထက် ‘တာဝန်’ အပ်နှင်းခံရခြင်းလို့ ယူဆရင်ပိုမိုကောင်းမွန်မယ်လို့ယူဆမိတယ်။ ဒါဆိုဘာတာဝန်တွေဖြစ်မလဲ ဆိုတာတချက် ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်၊ ပထမအချက်အနေနဲ့က ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု၊ ဒုတိယ အချက်အနေနဲ့ကတော့ ဖက်ဒရာယ်လမ်းစဉ်နဲ့ တတိယအနေနဲ့ ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုရလဒ် ဖြစ်ပေါ် လာအောင်လုပ်ဆောင်ရေးတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ မြင်လို့/ပြောလို့ရပါမယ်။
ပထမအချက်ဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကလဲ အပြောလွယ်သလောက် အရွေ့မှာ ခက်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ကနေ စတင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့နွေဦးဟာ ဘယ်ထိရောက်နေပြီလဲ ကျွန်တော်တို့ မျက်ခြေ မပြတ်ဖို့လိုသလို ဒေသတွင်းလိုလားချက်ကရော ဘယ်လိုနွေဦးလဲ။ ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်တာ ရှိသလား။ ဖန်တီးလို့မရတဲ့ အချက်တွေကိုရော ဘယ်လိုတွန်းကြမလဲ တွေးစရာတွေနဲ့ လုပ်စရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဓိက ကတော့ အနိုင်ရအစိုးရကနေ သဘောထားကြီးပြဖို့ အင်မတန် လိုပါတယ်။မြေပြင်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးမရသေးရင်တောင် စားပွဲဝိုင်းပေါ်မှာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ ပထမအဆင့် အနေနဲ့ အရေးကြီးပါတယ်။ မကြာသေးမီတုန်းက တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို လိပ်မူပြီး ပေးပို့တဲ့ ပေးစာတွေလိုမျိုးဟာ ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှာ ပါပါတယ်။ ကြိုဆိုရမှာပါ။ နောက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်မရတဲ့ ပါတီတွေကို ဘေးဖယ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အားလုံးပါဝင်တဲ့ စကားဝိုင်းမျိုး၊ အနည်းဆုံး အလွတ်သဘော ဖိတ်ကြားပြောဆိုခွင့်ပြုတာမျိုးဟာ တမျိုးသားလုံးငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ အရေးပါ တဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လို့မြင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခေတ်ပြိုင်နိုင်ငံရေး လို့ခေါ်လို့ရမယ့် ဖြစ်ပျက်မှုတွေကို သရုပ်ခွဲ ကြည့်ကြမယ် ဆိုရင် Identity Politic လို့ခေါ်တဲ့ ‘ဇာတိသညာ နိုင်ငံရေး’ ကိုပစ်ပယ်ထားလို့ရမယ် မထင်ပါဘူး။ ‘သမိုင်းနိဂုံးနဲ့နောက်ဆုံးလူ’ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ရေးသားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပါမောက္ခ ဖရန်စစ်ဖူကူယားမားရဲ့ Identity ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ‘ဇာတိသညာ’ ဆိုတာ လူသားရဲ့အရေးပါမှုကို အများမှအသိမှတ်ပြုခံလိုခြင်း (ဝါ) အများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ထားကာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိလိုခြင်း ပဓါနဝါဒအား ဖြန့်ကျက်လာခြင်းလို့ ဖွင့်ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာလဲ မတူညီတဲ့ ဇာတိသညာတွေ ပေါင်းစည်းထားတဲ့နိုင်ငံ။ ခုဖြစ်ပျက်နေတာတွေကလဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ မတူကွဲပြားမှုကို မျိုသိပ်ထားခဲ့ရာကနေ နိုင်ငံရေးအရ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုအရွေ့မှာ ပြည်တည်နာ ပေါက်သွားတဲ့ အခြေအနေလို့ ပြောရရင် မှားအံ့မထင်ဘူး။ အနာရှိရင်၊ ဆေးရှိရမယ်။ နိုင်ငံရေး အနာကို နိုင်ငံရေးဆေးနဲ့ကုရမယ်။ ဒါမှလဲ စစ်မှန်တဲ့၊ ရေရှည်တည်တံ့မယ့် ဖက်ဒရာယ်နိုင်ငံတော်သစ်ရဲ့ အုတ်မြစ်တွေချနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအတွက် လုပ်စရာတော့ အများကြီးရှိပါမယ်။ ပြန်လည်တည်ဆောက် ရမှာလဲ ရှိမယ်။ ပြန်လည် ညှိနှိုင်းဖို့လဲရှိရမယ်ပေါ့လေ။
နောက်တခုဖြစ်တဲ့ ဖက်ဒရာယ်လမ်းစဉ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီအပိုင်းကို ပြောရရင် ‘တတိယလှိုင်း’ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပြုစုခဲ့တဲ့ ပါမောက္ခ ဟန်တင်တန် ပြောခဲ့သလို ၁၉၇၀ ကနေ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အတောအတွင်း နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပုံ အပြောင်းအလဲနဲ့အတူ လစ်ဘရာယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီဖြစ်လာသလို နိစ္စဓူဝ ခေါင်းစဉ်တခုလဲ ဖြစ်လာတယ်။ ဒီလို အခြေအနေ စီးပွားရေးပုံစံနဲ့အတူ အပြန်အလှန် မှီခိုမှု၊ ဒွေးတော ယှက်တင်ဖြစ်မှုများ မြင့်တက်လာပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်နွယ်ခြင်း (globalization) ထွန်းကား လာပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဒီမိုကရေစီကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားမို့ ထားပါတော့။ လစ်ဘရာယ်ကိုရော ဘယ်လို ဖွင့်ဆိုကြ မလဲ ဆိုတဲ့နေရာမှာ လစ်ဘရာယ်ဆိုတာ ‘လွတ်လပ်မျှတမှု’ ဆိုတဲ့ ဖူကူးယားမားရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကို နှစ်သက်မိပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာရော လွတ်လပ်မျှတမှု ဘယ်လိုအခြေအနေလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရရင် ရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့ ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေငြာစာတမ်း ထဲမှာမှ အဓိကကျတဲ့ အချက် ၃ခုထဲက ဒုတိယမြောက်မှာ “စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရာယ် ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ထွန်း စေမည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပေါ်ပေါက်ရေး” လို့ကြေငြာထားတယ်။ အဲဒီ ‘စစ်မှန်သော’ ကို လစ်ဘရာယ်စံနှုန်းပဲလို့ ဖလှယ်လို့ရမလား တွေးကြည့်တော့ လက်တွေ့ကျမှုနဲ့ပဲ ဖွင့်ဆိုရမယ်လို အဖြေ ထွက်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအနှံ့က ဒေသတွေမှာ လစ်ဘရာယ် စံတန်ဖိုးနဲ့ ညီတဲ့ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားဖို့ဆိုတာ စစ်မှန်သော (ဝါ) လွတ်လပ်မျှတမှု ကအရေးကြီးပါတယ်။ ထပ်ဆင့်ဖွင့်ဆိုရရင် တန်းတူရည်တူရှိမှု၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အစရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုမူတွေပါ ကျွဲကူးရေပါ ပါလာမှာပဲ ဖြစ်တယ်။
နောက်ဆုံးပိုင်းအနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ပြောရရင် ဒီစကားလုံးဟာ မြန်မာပြည်မှာမှီတင်းတဲ့ သူတွေ အဆာငတ် ဆုံးနဲ့ မရရှိခဲ့ဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ခွဲခြားပြောဆိုတာမဟုတ်ပဲ သုံးသပ်ပြောရရင် တိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့ နယ်စွန် နယ်ဖြားတွေမှာ အလိုအပ်ဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်အနေနဲ့ မဲဆွယ် စဉ်အတွင်းတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှ အထူးသဖြင့်နယ်ဖက်တွင် ‘ဘာဆောက်ပေးမည်၊ ညာခင်းပေးမည်’ စသည်တို့ကို မဲဆွယ်မက်ဆေ့ခ်ျအဖြင့်ပင်သုံးကြသည်ကိုတွေ့ရလေသည်။ (နိုင်ငံရေး နားလည်ပါသည် ဆိုသူများမှပင် ထိုသို့သော ဖြစ်နိုင်ခြင်း/မဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ထက်၊ ထိုသို့သော ‘ကတိကဝတ်’ အား အားပေးအားမြှောက်လုပ်ကြသည်ကို အံ့အားသင့်ဖွယ် တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။)
ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုရာတွင် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိဲးရေးဖြစ်ဖို့လိုပါသည်။ ဒီနှစ်ခင်း နောက်နှစ်ပျက်သော လမ်းမျိုး၊ ဒီနှစ်တော့အဆင်ပြေ နောက်နှစ်အတွက်တော့ ရင်းဖို့လိုသော စိုက်ခင်းမျိုး စသည်တို့မဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါမည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအတွက် တည်ငြိမ်သောဈေးကွက်မျိုးရှိဖို့ ဖန်တီးဖို့လိုပါမည်။ ၎င်းတို့အား အခြေခံကာ လူလတ်တန်းစား များပြားလာဖို့ကြိုးစားဖို့လိုပါမည်။ ဒီအတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားသန်စေသည့် အင်စတီကျူးရှင်းများ ဖြစ်ဖို့၊ရှိဖို့ လိုပါမည်။ ပါမောက္ခ ဟန်တင်တန်က အင်စတီးကျူးရှင်းတွေဆိုတာ တည်ငြိမ်သော နိုင်ငံရေးအုတ်မြစ်လို့ ဆိုခဲ့တာမို့လား။
ဆိုတော့ အနှစ်ချုပ်ပြောရရင် မြန်မာပြည်ဟာ ဖက်ဒရာယ်လမ်းစဉ်အပေါ်အခြေခံ မတည်ဆောက်လျှင် ၂၀၃၀ အလွန် ၂၀၅၀ ဝန်းကျင်ဆိုလျှင် ကျရှုံးနိုင်ငံ ဖြစ်မည်မလွဲလို့ ပညာရှင်တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။ မှန်တာမမှန်တာကတပိုင်း။ စမ်းသပ်ဖို့ကတော့မလိုပါ။ လုပ်လို့ရတဲ့ လွယ်တဲ့အရာတွေ အရင် ကိုင်တွယ်ဖို့လိုပါမယ်။ ဒီလိုနေရာမှာ အစိုးရက အရေးကြီးပါတယ်။ သဘောထားကြီးဖို့၊ လက်ကမ်းဖို့ လိုပါ လိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်စိတ်ရှည်ဖို့လဲလိုမယ်။ အဓီက အကျဆုံးကတော့ အစိုးရယန္တယားမှာ လူမှန်၊နေရာမှန် ထည့်သွင်းဖို့လိုလိမ့်မယ်။
၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀
– Fransic Fukuyama, “Identity”. Profile Book Ltd. Great Britain, 2018.
– Samuel P. Huntington, “Political Scientist, Is Dead”. The New York Times.
– Harari, Yuval N. (2018). 21 lessons for the 21st century (First ed.). New York.
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲဟာ ဝိရောဓိတှေ ရှိနလေငျ့ကစား အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျကနေ ၂၀၁၅က ထကျ ပိုမိုသော ရာခိုငျနှုနျးအနိုငျနဲ့အတူ ပွီးဆုံးခဲ့ပွီးပဲဖွဈတယျ။ ဒီရလာဒျကို ‘အနိုငျ’ဆိုတဲ့ စကားလုံးထကျ ‘တာဝနျ’ အပျနှငျးခံရခွငျးလို့ ယူဆရငျပိုမိုကောငျးမှနျမယျလို့ယူဆမိတယျ။ ဒါဆိုဘာတာဝနျတှဖွေဈမလဲ ဆိုတာတခကျြ ကွညျ့ကွမယျဆိုရငျ၊ ပထမအခကျြအနနေဲ့က ငွိမျးခမျြးရေးတညျဆောကျမှု၊ ဒုတိယ အခကျြအနနေဲ့ကတော့ ဖကျဒရာယျလမျးစဉျနဲ့ တတိယအနနေဲ့ ကဏ်ဍအသီးသီးမှာ ဖှံ့ဖွိုးမှုရလဒျ ဖွဈပျေါ လာအောငျလုပျဆောငျရေးတှပေဲဖွဈတယျလို့ မွငျလို့/ပွောလို့ရပါမယျ။
ပထမအခကျြဖွဈတဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးဆိုတာကလဲ အပွောလှယျသလောကျ အရှမှေ့ာ ခကျပါတယျ။ ၂၀၁၀ကနေ စတငျခဲ့တဲ့ မွနျမာ့နှဦေးဟာ ဘယျထိရောကျနပွေီလဲ ကြှနျတျောတို့ မကျြခွေ မပွတျဖို့လိုသလို ဒသေတှငျးလိုလားခကျြကရော ဘယျလိုနှဦေးလဲ။ ကြှနျတျောတို့ဖနျတီးနိုငျတာ ရှိသလား။ ဖနျတီးလို့မရတဲ့ အခကျြတှကေိုရော ဘယျလိုတှနျးကွမလဲ တှေးစရာတှနေဲ့ လုပျစရာတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ အဓိက ကတော့ အနိုငျရအစိုးရကနေ သဘောထားကွီးပွဖို့ အငျမတနျ လိုပါတယျ။မွပွေငျမှာ ငွိမျးခမျြးရေးမရသေးရငျတောငျ စားပှဲဝိုငျးပျေါမှာ စဈမှနျတဲ့ ငွိမျးခမျြးရေး ရဖို့ ပထမအဆငျ့ အနနေဲ့ အရေးကွီးပါတယျ။ မကွာသေးမီတုနျးက တိုငျးရငျးသားပါတီတှကေို လိပျမူပွီး ပေးပို့တဲ့ ပေးစာတှလေိုမြိုးဟာ ဒီလိုလုပျဆောငျမှုမြိုးမှာ ပါပါတယျ။ ကွိုဆိုရမှာပါ။ နောကျပွီး ရှေးကောကျပှဲ အနိုငျမရတဲ့ ပါတီတှကေို ဘေးဖယျထားတာမြိုးမဟုတျပဲ အားလုံးပါဝငျတဲ့ စကားဝိုငျးမြိုး၊ အနညျးဆုံး အလှတျသဘော ဖိတျကွားပွောဆိုခှငျ့ပွုတာမြိုးဟာ တမြိုးသားလုံးငွိမျးခမျြးရေးရဖို့ အရေးပါ တဲ့ လုပျဆောငျသငျ့တဲ့ လုပျဆောငျခကျြလို့မွငျပါတယျ။
နောကျပွီး ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ခတျေပွိုငျနိုငျငံရေး လို့ချေါလို့ရမယျ့ ဖွဈပကျြမှုတှကေို သရုပျခှဲ ကွညျ့ကွမယျ ဆိုရငျ Identity Politic လို့ချေါတဲ့ ‘ဇာတိသညာ နိုငျငံရေး’ ကိုပဈပယျထားလို့ရမယျ မထငျပါဘူး။ ‘သမိုငျးနိဂုံးနဲ့နောကျဆုံးလူ’ ဆိုတဲ့ စာအုပျရေးသားခဲ့တဲ့ နိုငျငံရေးသိပ်ပံပါမောက်ခ ဖရနျစဈဖူကူယားမားရဲ့ Identity ဆိုတဲ့ စာအုပျထဲမှာ ‘ဇာတိသညာ’ ဆိုတာ လူသားရဲ့အရေးပါမှုကို အမြားမှအသိမှတျပွုခံလိုခွငျး (ဝါ) အမြားနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ လက်ခဏာတှကေို နိုငျငံရေးရညျမှနျးခကျြထားကာ ဂုဏျသိက်ခာရှိလိုခွငျး ပဓါနဝါဒအား ဖွနျ့ကကျြလာခွငျးလို့ ဖှငျ့ဆိုပါတယျ။ လကျရှိမွနျမာနိုငျငံဟာလဲ မတူညီတဲ့ ဇာတိသညာတှေ ပေါငျးစညျးထားတဲ့နိုငျငံ။ ခုဖွဈပကျြနတောတှကေလဲ နှဈပေါငျးမြားစှာ မတူကှဲပွားမှုကို မြိုသိပျထားခဲ့ရာကနေ နိုငျငံရေးအရ ဆငျ့ကဲပွောငျးလဲမှုအရှမှေ့ာ ပွညျတညျနာ ပေါကျသှားတဲ့ အခွအေနလေို့ ပွောရရငျ မှားအံ့မထငျဘူး။ အနာရှိရငျ၊ ဆေးရှိရမယျ။ နိုငျငံရေး အနာကို နိုငျငံရေးဆေးနဲ့ကုရမယျ။ ဒါမှလဲ စဈမှနျတဲ့၊ ရရှေညျတညျတံ့မယျ့ ဖကျဒရာယျနိုငျငံတျောသဈရဲ့ အုတျမွဈတှခေနြိုငျမှာ ဖွဈတယျ။ ဒီအတှကျ လုပျစရာတော့ အမြားကွီးရှိပါမယျ။ ပွနျလညျတညျဆောကျ ရမှာလဲ ရှိမယျ။ ပွနျလညျ ညှိနှိုငျးဖို့လဲရှိရမယျပေါ့လေ။
နောကျတခုဖွဈတဲ့ ဖကျဒရာယျလမျးစဉျနဲ့ ဒီမိုကရစေီအပိုငျးကို ပွောရရငျ ‘တတိယလှိုငျး’ ဆိုတဲ့ စာအုပျပွုစုခဲ့တဲ့ ပါမောက်ခ ဟနျတငျတနျ ပွောခဲ့သလို ၁၉၇၀ ကနေ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈအတောအတှငျး နိုငျငံရေးဖှဲ့စညျးပုံ အပွောငျးအလဲနဲ့အတူ လဈဘရာယျဒီမိုကရစေီဆိုတာ လူတိုငျးကွိုကျတဲ့ နှငျးဆီဖွဈလာသလို နိစ်စဓူဝ ခေါငျးစဉျတခုလဲ ဖွဈလာတယျ။ ဒီလို အခွအေနေ စီးပှားရေးပုံစံနဲ့အတူ အပွနျအလှနျ မှီခိုမှု၊ ဒှေးတော ယှကျတငျဖွဈမှုမြား မွငျ့တကျလာပွီး ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာဆကျနှယျခွငျး (globalization) ထှနျးကား လာပါတယျ။
ဒီနရောမှာ ဒီမိုကရစေီကတော့ လူတိုငျးသိပွီးသားမို့ ထားပါတော့။ လဈဘရာယျကိုရော ဘယျလို ဖှငျ့ဆိုကွ မလဲ ဆိုတဲ့နရောမှာ လဈဘရာယျဆိုတာ ‘လှတျလပျမြှတမှု’ ဆိုတဲ့ ဖူကူးယားမားရဲ့ဖှငျ့ဆိုခကျြကို နှဈသကျမိပါတယျ။ ဒီလိုဆိုရငျ မွနျမာပွညျမှာရော လှတျလပျမြှတမှု ဘယျလိုအခွအေနလေဲ ဆိုတာ ကွညျ့ရရငျ ရှေးကောကျခံအစိုးရရဲ့ ၂၀၂၀ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ထုတျပွနျခဲ့တဲ့ ကွငွောစာတမျး ထဲမှာမှ အဓိကကတြဲ့ အခကျြ ၃ခုထဲက ဒုတိယမွောကျမှာ “စဈမှနျသော ဒီမိုကရစေီ ဖကျဒရာယျ ပွညျထောငျစု ဖွဈထှနျး စမေညျ့ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ပျေါပေါကျရေး” လို့ကွငွောထားတယျ။ အဲဒီ ‘စဈမှနျသော’ ကို လဈဘရာယျစံနှုနျးပဲလို့ ဖလှယျလို့ရမလား တှေးကွညျ့တော့ လကျတှကေ့မြှုနဲ့ပဲ ဖှငျ့ဆိုရမယျလို အဖွေ ထှကျပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ။ နိုငျငံအနှံ့က ဒသေတှမှော လဈဘရာယျ စံတနျဖိုးနဲ့ ညီတဲ့ ဒီမိုကရစေီထှနျးကားဖို့ဆိုတာ စဈမှနျသော (ဝါ) လှတျလပျမြှတမှု ကအရေးကွီးပါတယျ။ ထပျဆငျ့ဖှငျ့ဆိုရရငျ တနျးတူရညျတူရှိမှု၊ ကိုယျပိုငျပွဌာနျးခှငျ့ အစရှိတဲ့ ပွညျထောငျစုမူတှပေါ ကြှဲကူးရပေါ ပါလာမှာပဲ ဖွဈတယျ။
နောကျဆုံးပိုငျးအနနေဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုကို ပွောရရငျ ဒီစကားလုံးဟာ မွနျမာပွညျမှာမှီတငျးတဲ့ သူတှေ အဆာငတျ ဆုံးနဲ့ မရရှိခဲ့ဆုံးပဲဖွဈတယျ။ခှဲခွားပွောဆိုတာမဟုတျပဲ သုံးသပျပွောရရငျ တိုငျးရငျးသားဒသေနဲ့ နယျစှနျ နယျဖွားတှမှော အလိုအပျဆုံးပဲဖွဈတယျ။ ဒီအတှကျကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲကတိကဝတျအနနေဲ့ မဲဆှယျ စဉျအတှငျးတှငျ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားမှ အထူးသဖွငျ့နယျဖကျတှငျ ‘ဘာဆောကျပေးမညျ၊ ညာခငျးပေးမညျ’ စသညျတို့ကို မဲဆှယျမကျဆခြေျ့အဖွငျ့ပငျသုံးကွသညျကိုတှရေ့လသေညျ။ (နိုငျငံရေး နားလညျပါသညျ ဆိုသူမြားမှပငျ ထိုသို့သော ဖွဈနိုငျခွငျး/မဖွဈခွငျးစသညျတို့ထကျ၊ ထိုသို့သော ‘ကတိကဝတျ’ အား အားပေးအားမွှောကျလုပျကွသညျကို အံ့အားသငျ့ဖှယျ တှမွေ့ငျခဲ့ရပါသညျ။)
ဖှံ့ဖွိုးရေးဆိုရာတှငျ ရရှေညျတညျတံ့သော ဖှံ့ဖွိဲးရေးဖွဈဖို့လိုပါသညျ။ ဒီနှဈခငျး နောကျနှဈပကျြသော လမျးမြိုး၊ ဒီနှဈတော့အဆငျပွေ နောကျနှဈအတှကျတော့ ရငျးဖို့လိုသော စိုကျခငျးမြိုး စသညျတို့မဖွဈဖို့ လိုအပျပါမညျ။ ကုနျထုတျလုပျငနျးအတှကျ တညျငွိမျသောစြေးကှကျမြိုးရှိဖို့ ဖနျတီးဖို့လိုပါမညျ။ ၎င်းငျးတို့အား အခွခေံကာ လူလတျတနျးစား မြားပွားလာဖို့ကွိုးစားဖို့လိုပါမညျ။ ဒီအတှကျ ဖှံ့ဖွိုးမှုကို အားသနျစသေညျ့ အငျစတီကြူးရှငျးမြား ဖွဈဖို့၊ရှိဖို့ လိုပါမညျ။ ပါမောက်ခ ဟနျတငျတနျက အငျစတီးကြူးရှငျးတှဆေိုတာ တညျငွိမျသော နိုငျငံရေးအုတျမွဈလို့ ဆိုခဲ့တာမို့လား။
ဆိုတော့ အနှဈခြုပျပွောရရငျ မွနျမာပွညျဟာ ဖကျဒရာယျလမျးစဉျအပျေါအခွခေံ မတညျဆောကျလြှငျ ၂၀၃၀ အလှနျ ၂၀၅၀ ဝနျးကငျြဆိုလြှငျ ကရြှုံးနိုငျငံ ဖွဈမညျမလှဲလို့ ပညာရှငျတှရေဲ့ သုံးသပျခကျြတှေ ရှိပါတယျ။ မှနျတာမမှနျတာကတပိုငျး။ စမျးသပျဖို့ကတော့မလိုပါ။ လုပျလို့ရတဲ့ လှယျတဲ့အရာတှေ အရငျ ကိုငျတှယျဖို့လိုပါမယျ။ ဒီလိုနရောမှာ အစိုးရက အရေးကွီးပါတယျ။ သဘောထားကွီးဖို့၊ လကျကမျးဖို့ လိုပါ လိမျ့မယျ။ ဒါ့အပွငျစိတျရှညျဖို့လဲလိုမယျ။ အဓီက အကဆြုံးကတော့ အစိုးရယန်တယားမှာ လူမှနျ၊နရောမှနျ ထညျ့သှငျးဖို့လိုလိမျ့မယျ။